Gokora Rinosimuka Kusunga Chibatanidza
Pole-Yakakwira Inogona Kugadziriswa
Inoshanda Mitemo yePower Transmission uye Simba Kukundikana kweiyo Yakakwira Voltage switchgear
KYN28A-12 yakakwira voltage switchgear "mashanu ekudzivirira" ekupindirana kwekushandisa zvinodiwa; 1. Dzivirira kukanganisa kweye breaker breaker - redunhu breaker ruoko rinofanira kunge riri munzvimbo yekushanda kana nzvimbo yekuyedza, redunhu breaker rinogona kuvharwa, kuvhurika mashandiro. 2.Kudzivirira kufamba kwedunhu bre ...
6KV Yakakwira Voltage switchgear
Simba remagetsi, senzvimbo inogadzirwa magetsi, kazhinji inofanirwa kubata nemagetsi.Ku fekitori yedu, mota iri mufekitori inonyanya kugovaniswa mu6KV mota uye 400V mota.6KV switchgear chinhu chakakosha chemagetsi. Yakakwira voltage switchgear inoshandiswa zvakanyanya musimba distributi ...
Ndeipi basa reiyo cable terminal?
Iyo tambo yekupedzisira musoro inobatanidza kudzivirira mvura, kusagadzikana kwekudzvinyirira, kudzivirira, uye kuputira, uye ine yakanaka magetsi uye yemagetsi zvivakwa, uye inogona kushandiswa kwenguva yakareba pasi peakasiyana mamiriro akasimba ezvakatipoteredza. Saka chii chiri basa reiyo tambo terminal? Rega nditaure nezvazvo kwauri ini ...
Sensor Technology Inoita Maguta Akangwara
Iyo chirongwa chekuvaka chemaguta akangwara neInternet yezvinhu chakasundira masensa kumberi. Kunyangwe iri kuChina kana pasi rese, kuvaka nharaunda dzakangwara kwave kuita kusingachinjiki maitiro. Munzvimbo iyi yakajairika, maseru se "zambuko" remaguta akangwara anozo ...
Hunyanzvi hwekugadzira shanu uye zviratidzo zvehunyanzvi zveiyo sensor
Huwandu hwema sensors huri kuwanda pamusoro penzvimbo dzepasi uye munzvimbo dzakatikomberedza, ichipa nyika data.Ama sensors anodhura ndiwo anofambisa kusimudzira kweInternet yezvinhu uye shanduko yedhijitari yakatarisana nenzanga yedu, zvakadaro ichisanganisa ...
Iyo yekukanganisa kuongorora uye zvipikiso zve switchgear
Chii chinonzi switchgear? Switchgear inosanganisira imwe kana anopfuura low-voltage switchgear uye inoenderana kutonga, kuyera, chiratidzo, kuchengetedza, mutemo uye zvimwe zvishandiso, nemugadziri anoona kune ese emukati emagetsi uye mehendi kubatana, musangano wakazara weyakaumbwa compone ...
Pfupiso yeRuzivo rwekutanga rweDry-mhando Shanduko
Dry-mhando maTransformers anoshandiswa zvakanyanya mumagetsi emunharaunda, zvivakwa zvepamusoro-soro, nhandare, terminal CNC michina michina uye dzimwe nzvimbo. Zvichitaurwa zviri nyore, yakaoma-yerudzi maTransformer inoreva kune maTransformer ane macores uye mamhepo asina kunyudzwa mukudzivirira mafuta. Nzira dzekutonhora dzakakamurwa kuita echisikigo ...
Chengetedzo yekushandisa Yakakwira-voltage switchgear
Nekuti switchgear iri kurarama, ine njodzi huru. Ukasaterera paunenge uchiishandisa, zvinoita kuti muchina utadze kushanda zvakajairika, uye zvinokonzeresa kuvhunduka kwemagetsi, zvinozokanganisa hupenyu hwako. Naizvozvo, kana uchishandisa yakakwira-voltage switchgear, iwe unofanirwa kubhadhara zvakanyanya kutarisisa ...
Maitiro Ekuisa uye Kushanda Kudonhedza Fuse Kucheka
1/6 Yekushandisa nzira Iyo yekumisikidza yekudonhedza fuse inofanirwa kuzadzisa zvinotevera zvinodiwa Usati waiswa, tarisa kuti usimbise mukaha uripakati peiyo yakanyunguduka chubhu uye inodzivirira rutsigiro. Saizi inoenderana inosangana nezvinodiwa zvebhuku rekurairidza kuona zvakakwana Zvakaringana kuonana pres ...
Kushanda kweDropout Fuse Kucheka
Kugadzirira kwekuchengetedza: Pakuburitsa fuseji yerudzi rwekudonhedza, munhu anoshanda anofanira kushandisa iyo yekudzivirira tsvimbo ine yakaringana voltage nhanho uye akapasa bvunzo, kupfeka shangu dzekuputira, magurovhosi ekuputira, chivharo chekuputira nemagogorosi, kana kumira pachikuva chakaoma chehuni, uye wotariswa. kuchengetedza kuchengetedzeka kwemunhu ....
Ndeupi musiyano uripo pakati penzvimbo dzakakwira magetsi wedunhu mudariki uye wekusiyanisa switch?
Yakakwira voltage wedunhu mudariki (kana yakakwira magetsi switch) ndiyo hombe simba kudzora michina yeiyo chiteshi, ine arc yekudzimisa hunhu, kana yakajairika mashandiro ehurongwa, inogona kudimbura uye kuburikidza nemutsara uye akasiyana magetsi magetsi asina mutoro uye mutoro ikozvino; Kana iyo f ...
Musiyano uripo pakati pekuchinja kabhodhi, inflatable kabati uye solid kabati
ne admin pane 21-08-03
Ring network kabati: inozivikanwawo seHXGN-12, XGN15-12 mhando yakakwira voltage switchgear.Originally inoreva switch switch kabhoni inoshandiswa mumhete yekuparadzira network, nekuda kwechimiro chayo chakareruka, chinowanzo shandiswa mutoro switch uye fuse mubatanidzwa, yakadaro switch batch mhete. network kabati. 1, mhete ne ...
Mitemo Inoshanda yePower Transmission an ...
Shanu dhizaini yekugadzira uye technical chiratidzo ...